ခံစားချက်ပြပုံတွေက ပြောပြပေးမယ့် လက်တလောသင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာများ – SainPwar
SainPwar > ဗဟုသုတများ > ခံစားချက်ပြပုံတွေက ပြောပြပေးမယ့် လက်တလောသင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာများ
အချိန်တန်ရင်ခေါ်အိပ်လိုက် ပြီးရင်ပြန်လွှတ်လိုက်နဲ့ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေဆို ဂျုံးဂျုံးကျနေပါပြီ…
ခံစားချက်ပြပုံတွေက ပြောပြပေးမယ့် လက်တလောသင်ကြုံတွေ့ရမယ့်အရာများသင့်အနေနဲ့ လက်တလော ဘယ်လိုအရာတွေကို ကြုံတွေ့ရမလဲ ဆိုတာ သိချင် ပါသလား? ဒီနေ့မှာတော့
စိတ်ခံစားချက်ကိုပြသပေးနေတဲ့ ပုံလေးတွေကို ဖော်ပြပေး ထားမှာဖြစ်ပြီး သင် အနှစ်သက်ဆုံးပုံ တစ်ပုံကို ရွေးချယ်ပြီး လက်တလော သင်ကြုံတွေ့ရမယ့် အရာတွေကို လေ့လာကြည့်လိုက် ရအောင်နော်။
(၁) HOPE ( မျှော်လင့်ချက်)
သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အရာတွေ အတွက် အောင်မြင်မှု ရရှိဖို့ အချိန်နည်းနည်းပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရှိနေရှိနေ လက်မလျော့ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က မကြာခင် အချိန်အတွင်းမှာ သေချာပေါက် အောင်မြင်လာမယ့် အရာတွေ ဖြစ်နေလို့ပါ။ ဒါပေမယ့် ရည်မှန်း ချက်တွေအောင်မြင်ဖို့ ကြိုးစားရမယ် ဆိုပေမယ့်လည်း သင့်အနေနဲ့ အပြည့်အဝအနားယူဖို့ကလည်း လိုအပ်ပြန် ပါသေးတယ်။ ဒါကြောင့် အနားယူဖို့ မတွန့်ဆုတ်နေပါနဲ့။
(၂) BELIEVE (ယုံကြည္မှု)သင့် အနေနဲ့ အခုချိန်မှာ အကောင်းဘက်ကနေ အရာအားလုံးကို စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။
ဒီအချိန်က သင့်ရဲ့ဘဝ ရည်မှန်းချက်တွေကို စဉ်းစားဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ အခုလက်ရှိနေနေရတဲ့ နေရာမှာ မပျော်လို့ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ချင်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်
ဘဝမှာ ကြီးမားတဲ့ပြောင်းလဲ မှုကြီးလုပ်ဖို့ စဉ်းစားနေပါသလား? ဒီအချိန်က သင့်အတွက် ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံး အခြေအနေပါ။
ဒီပြောင်းလဲမှုတွေ အတွက် ကောင်းသောအကျိုးရလဒ်တွေကိုလည်း သေချာပေါက်ခံစားရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် အခုချိန်က ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ဆောင်ဖို့ အကောင်းဆုံးအခြေအနေပါ။
(၃) LOVE (ချစ်ခြင်းတရား)ဒီအချိန်က သင့်အတွက် အချစ်ရေးကံအကောင်းဆုံး အချိန်အခါပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်မှာ ချစ်သူမရှိသေးဘူးဆိုရင် အခုအချိန်က သင့်အတွက် ချစ်သူရဖို့ အခွင့်အရေးတွေ အများကြီးရှိနေပါတယ်။
ဒါကြောင့် ချစ်သူထားဖို့စဉ်းစားထားရင် အခုချိန်က ထားဖို့အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ ချစ်သူရှိပြီးသားဆိုရင်လည်း သင်တို့နှစ်ယောက်က လက်တလောမှာ သာယာပျော်ရွှင်တဲ့အချစ်ရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရမှာပါ။
(၁) HOPE ( မျှော်လင့်ချက်)သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အရာတွေ အတွက် အောင်မြင်မှု ရရှိဖို့ အချိန်နည်းနည်းပဲ လိုပါတော့တယ်။ ဒါကြောင့် အခုချိန်မှာ သင့်အနေနဲ့ သင်ကြိုးစားခဲ့တဲ့ အရာတွေကို ဘယ်လိုအခက်အခဲပဲရှိနေရှိနေ လက်မလျော့ဖို့ လိုအပ် ပါတယ်။
(၂) BELIEVE (ယုံကြည္မှု)သင့် အနေနဲ့ အခုချိန်မှာ အကောင်းဘက်ကနေ အရာအားလုံးကို စဉ်းစားဖို့ လိုအပ်နေပါတယ်။ ဒီအချိန်က သင့်ရဲ့ဘဝ ရည်မှန်းချက်တွေကို စဉ်းစားဖို့ အကောင်းဆုံး အချိန်ပါပဲ။ သင့်အနေနဲ့ အခုလက်ရှိနေနေရတဲ့ နေရာမှာ မပျော်လို့ ပြောင်းလဲမှုတွေ လုပ်ချင်ပါသလား ဒါမှမဟုတ်
Previous Article သူတို့လေးတွေ ကျဆုံးတာ တဆက်ဆက်နာတယ် နာလို့ဆက်တော်လှန်နေမယ်
Next Article ဖုန်းကိုင်တဲ့ ပုံစံက ဖော်ပြနေတဲ့ သင့်ရဲ့အကျင့်စရိုက်